8 ka mid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka G/Banaadir oo heysta Baasaboor Ajnabi | Baydhabo Online
Iyadoo xalay la magacaabay illaa 14 Guddoomiyeyaasha cusub ee degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa waxaa soo baxaya in 8 ka mid ah Guddoomiyeyaashaas ay yihiin qurbo-joog, kuwaasoo heysta baasabooro ajnabi.
Tani ayaa noqoneysa tiradii ugu badneyd oo madax ka noqda degmooyinka Gobolka Banaadir, taasoo dad badan su’aal ka keeneen aqoonta iyo waayo aragnimada ay xilligan u yeelan karaan shaqsiyaadka la magacaabay xilalka loo dhiibay, maadaama ay dalka muddo ka maqnaayeen.
Guddoomiyeyaasha cusub ee degmooyinka ayaa heysta baasaboorada UK, USA iyo Holland, waxaana lix ka mid ah ay heystaan baasaboorka UK, kuwaasoo qaarkood ay xilli isku magaalo ku wada noolaayeen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mr Taabid.
Xubnaha loo magacaabay degmooyinka Yaaqshiid, Hodan, Howlwadaag, Wadajir, C/casiis, Waaberi, Shibis iyo Xamar Jajab ay heystaan baasaboor ajnabi ah.
Baraha bulshada ayaa qabsaday sheekooyin yaab leh, markii ay soo baxeen shaqsiyaadka loo magacaabay xilalka degmooyinka, waxaana dadka qaar ay soo qaadanayeen halheys kala duwan, sida “Kooxdii reer Suudaan waxaa bedelay koox Qurbo Joog ah oo Yurub iyo America ka timid”.
Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa ka dhex jiray baraha bulshada dagaal u dhaxeeyay dadka qurbaha ka yimid oo xilligan helaya xilalka ugu badan ee dowladda iyo dhalinyarada gudaha dalka ku sugan ee duruufaha adag la kulmayay, kuwaasoo ah kuwo shaqo la’aan ah.
Dad badan ayaa ka digaya in takoorid lagu sameeyo dhalinyarada gudaha dalka ku sugan, lagana door bido kuwa heysta baasabooro ajnabi ah ay sababi karto in dhiira gelin u noqoto tahriibka oo sii bata, maadaama uu ku fikiro karo in hadii uu dibada tago, baasaboorna soo qaato uu xil ka qaban karo dalka.